“ စကားကြီး (၁၀)မျိုး “ – GuGuGarGar
စကားပြောဆို ရာ၌ ကျွမ်းကျင် လိမ္မာစေရန် စကားပြောနည်း ၁၀-မျိုးကို ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားသည်၊ မြန်မာလူမျိုးတို့က စကားကြီး ၁၀-မျိုးဟု ခေါ်ဆိုကြသည်၊ ယင်းစကားကြီး ၁၀-မျိုး၏ အမည်ကို မုန်တိုင်ပင် ဆရာတော် က မှတ်သားရလွယ်ကူစေရန် သုံးပုံ တံချူကျမ်း၌ အောက်ပါအတိုင်း လင်္ကာစီထားပါသည်။
၁။ ရေကူး ညာတင်
၂။ ကောက်ပင် ရိတ်လှီး
၃။ ရေစီး ဖောင်ဆန်
၄။ အိုးတန် ဆန်ခပ်
၅။ ဆီပွတ် ကျည်ပွေ့
၆။ ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင်
၇။ တောင်သူ ယာခုတ်
၈။ ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပြစ်
၁၀။ ခက်တင် မောင်းနင်း အခြင်းဆယ်ပါး
ဤစကားကို မှတ်သားဝမ်းတွင်း လေ့စေမင်း။
မြစ်တဘက်မှ လိုရာဆိပ်ကမ်းသို့ ကူးလိုလျှင် မြစ်ညာက တင်၍ကူးမှ လိုရာသို့ ရောက်သကဲ့သို့ မိမိအလိုရှိရာသို့ရောက်အောင် အထက်က တင်ကူး၍ ပြောခြင်းသည် ( ရေကူးညာတင် ပြောနည်း ) မည်၏။ အူထုံးရောဂါသည်ကို ကုရာ၌ ဇီဝက-ပြောသောစ ကားကို သာဓကထုတ်အပ်၏။
စပါးရိတ်လျှင် ကောက်ပင်ကို လက်တဆုပ်ဖြင့် ဆုပ်သိမ်းကာ တံဇဉ်ဖြင့်အရင်းမှ ဖြတ်၍ ရိတ်ယူသကဲ့သို့ တဘက်လူ၏ စကားကို သိမ်းကျုံးဖမ်းယူပြီးမှ အရင်းကဖြတ်၍ ပိုင်လောက်အောင် ပြောဆိုခြင်းသည် (ကောက်ပင်ရိတ်လှီး ပြောနည်း ) မည်၏။ သူဌေးသား ၂-ယောက်နှင့် ဗျိုင်းပုံဝတ္ထုကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၃။ ရေစီးဖောင်ဆန် ပြောနည်း
ဖောင်ကြီးသည် အညာသို့ ဆန်သောကာလ လိုရာဆန္ဒရှိသမျှကို တင်ယူ၍ ဖြည်းညင်းသာယာစွာ ဆန်လျှင် လိုရာအရပ်သို့ ရောက်နိုင် သကဲ့သို့ စကားအရာတွင်လည်း ဥပမာ-ဥပမေယျတို့ဖြင့် ဖြည်းညင်းသာယာစွာ လိုရာရောက်အောင် ပြောဆိုခြင်းသည် (ရေစီးဖေညင်ဆန် ပြောနည်း ) မည်၏။ ဟံသာဝတီဘုရင် ရာဇာဓိရာဇ်က ( အဆွေတော် ) ဟု ရေးသားသည်ကို ဒွါရ၀တီမင်းက မကျေနပ်၍ ဟံသာဝတီ သားတို့က ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၄။ အိုးတန် ဆန်ခတ် ပြောနည်း
အိုးနှင့်ဆန်သည် တန်အောင်ချက်လျှင် နူးနပ်စွာ သုံးဆောင်ရသကဲ့သို့ စကားအရာတွင်လည်း မယုတ်မလွန်နှင့် လိုရင်းရောက်အောင် ပြောဆိုခြင်းသည် ( အိုးတန် ဆန်ခတ် ပြောနည်း) မည်၏။ သားရွှေအိုးထမ်းလာသည်ကို မြင်လိုပါသည်-ဟု ပြောဆိုသော သုဝဏ္ဏသာမ၏ မိဘ ၂-ပါး ပြောဆိုပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၅။ ဆီပွတ် ကျည်ပွေ့ ပြောနည်း
ဆီကို ရအောင် ပွတ်သည့်အခါတွင် အထပ်ထပ်အခါခါ ပွတ်ရသကဲ့သို့ အလိုရှိသောစကားကို အထပ်ထပ် ပြောဆိုခြင်းသည်( ဆီပွတ်ကျည်ပွေ့ ပြောနည်း ) မည်၏။ ဘုရားပိန္နဲတိုင်ကိစ္စ ဆွေးနွေးရာ၌ မကျည်းနှစ်လဲ ကောင်း၊ ကျွန်းလဲ ကောင်း။ ရှားနှစ်လဲ ကောင်း၊ ကျွန်းလဲ ကောင်း-ဟု ပြောဆိုပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၆။ ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင် ပြောနည်း
ဆင်ဝှေ့မည်ဟု လိုက်လျှင် လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း တိမ်းရှောင်က ချမ်းသာသကဲ့သို့ စကားအရာတွင်လည်း မိမိအဖို့ ဘေးရောက်မည့် စကားကို ရှောင်လွှဲ၍ ပြောဆိုခြင်းသည် ( ဆင်ဝှေ့ရန်ရှေင် ပြောနည်း ) မည်၏။ ရက်မအောက် မြေကြီးအထိ ရွှေချထားသော အိမ်ရှေ့မင်း ၏ ကျောင်းမှ ရွှေများကို မြို့ဝန်က အဖျက်ခိုင်းရာ အိမ်ရှေ့မင်း စိတ်ဆိုးသည်ကို ပြေလည်အောင် လျှောက်ထားသော မြို့ဝန်၏စကား ကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၇။ တောင်သူ ယာခုတ် ပြောနည်း
တောင်သူတို့သည် ယာခုတ်လျှင် ခြုံငယ် သစ်ပင်ငယ်တို့ကို ဦးစွာ ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပြီးမှ သစ်ပင်ကြီးငယ်များကို လှဲသကဲ့သို့ စကား အရာတွင်လည်း ဦးစွာ စကားငယ်ကိုပြော၍ နောက်မှ စကားကြီးများကို ပြောခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူခြင်းသည် (တောင်သူ ယာခုတ် ပြောနည်း ) မည်၏။ အမတ်ကြီးလေးဦးနှင့် မဟောသဓာသုခမိန်တို့ ဥစ္စာနှင့်ပညာ ဘယ်ဟာက-မြတ်သည် ဟူသော အငြင်းပွားပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၈။ ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပစ် ပြောနည်း
ကြက်တို့၏သဘောသည် ခွပ်မည်ပြုသောအခါ နောက်သို့ဆုတ်ဟန်ပြု၍ တကယ်ခွပ်သောအခါမှသာ စီး၍ခွပ်သကဲ့သို့ စကားအရာ တွင်လည်း သူ့အလိုကို လိုက်တန်သ၍ လိုက်ပြီးလျှင် စီးသာသောအခါမှ စီးလျက် ပြောသောစကားမျိုးသည် ( ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပစ် ပြောနည်း ) မည်၏။ က၀ိသေတ္တု မဉ္ဇူသာကျမ်း၌ ဖော်ပြပါရှိသော တရုတ်ငရွှေကြည်၏ မီးလောင်ကိစ္စအတွက် တရုတ်သံများနှင့် အမတ်ကြီးဦးပေါဦးတို့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
ဓမ္မကရိုဏ်းခေါ်သော ရေစစ်ကို ရေတွင်နှစ်၍ ရေပြည့်လျှင် အပေါက်ကို လက်ဖြင့် ပိတ်ယူပါက ရေမထွက်နိုင်သကဲ့သို့ တဘက်လူ၏ စကားကို ပိတ်မိအောင် ပြောဆိုခြင်းသည် ( ရေစစ်ပမာ စကားပြောနည်း ) မည်၏။ သူငယ်လေးယောက်နှင့် သူအိုကြီးတို့ ယုံတမ်းစကား ပြောကြားပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၁၀။ ခက်တင် မောင်းနင်း ပြောနည်း
သူ့စကားကို ဟုတ်၏လည်း မဆို၊ မဟုတ်ဟုလည်း မဆိုဘဲ မတင်တကျ ပြောဆိုခြင်းသည် ( ခက်တင် မောင်းနင်း ပြောနည်း ) မည်၏။ ဤသူ ငါ့တူ-မဟုတ်ဟု မည်သူပြောသနည်း-ဟု တောင်ဖီလာဆရာတော် ပြောကြားပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
မှတ်ချက်။ စကားကြီး ၁၀-မျိုးအကြောင်း ပြဆိုသော ပုံသက်သေ သာဓက၀တ္ထုများကို မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၃)တွင် အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြပါရှိသည်။ ထိုကျမ်း၌ လေ့လာကြည့်ရှုကြပါကုန်။ .
( အောင်ပွဲရ ကဗျာ )
၃။ ရေစီးဖောင်ဆန်၊ ပြောဆိုဟန်၊ ဝေဖန်နိုင်းဆ အောင်ပွဲရ။
၁၀။ ခက်တင်မောင်းနင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ မယွင်းမှန်လှ အောင်ပွဲရ။ Credit
စကားပွောဆို ရာ၌ ကြှမျးကငျြ လိမ်မာစရေနျ စကားပွောနညျး ၁၀-မြိုးကို ခှဲခွား သတျမှတျထားသညျ၊ မွနျမာလူမြိုးတို့က စကားကွီး ၁၀-မြိုးဟု ချေါဆိုကွသညျ၊ ယငျးစကားကွီး ၁၀-မြိုး၏ အမညျကို မုနျတိုငျပငျ ဆရာတျော က မှတျသားရလှယျကူစရေနျ သုံးပုံ တံခြူကမျြး၌ အောကျပါအတိုငျး လင်ျကာစီထားပါသညျ။
မွဈတဘကျမှ လိုရာဆိပျကမျးသို့ ကူးလိုလြှငျ မွဈညာက တငျ၍ကူးမှ လိုရာသို့ ရောကျသကဲ့သို့ မိမိအလိုရှိရာသို့ရောကျအောငျ အထကျက တငျကူး၍ ပွောခွငျးသညျ ( ရကေူးညာတငျ ပွောနညျး ) မညျ၏။ အူထုံးရောဂါသညျကို ကုရာ၌ ဇီဝက-ပွောသောစ ကားကို သာဓကထုတျအပျ၏။
စပါးရိတျလြှငျ ကောကျပငျကို လကျတဆုပျဖွငျ့ ဆုပျသိမျးကာ တံဇဉျဖွငျ့အရငျးမှ ဖွတျ၍ ရိတျယူသကဲ့သို့ တဘကျလူ၏ စကားကို သိမျးကြုံးဖမျးယူပွီးမှ အရငျးကဖွတျ၍ ပိုငျလောကျအောငျ ပွောဆိုခွငျးသညျ (ကောကျပငျရိတျလှီး ပွောနညျး ) မညျ၏။ သူဌေးသား ၂-ယောကျနှငျ့ ဗြိုငျးပုံဝတ်ထုကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
ဖောငျကွီးသညျ အညာသို့ ဆနျသောကာလ လိုရာဆန်ဒရှိသမြှကို တငျယူ၍ ဖွညျးညငျးသာယာစှာ ဆနျလြှငျ လိုရာအရပျသို့ ရောကျနိုငျ သကဲ့သို့ စကားအရာတှငျလညျး ဥပမာ-ဥပမယေတြို့ဖွငျ့ ဖွညျးညငျးသာယာစှာ လိုရာရောကျအောငျ ပွောဆိုခွငျးသညျ (ရစေီးဖညေငျဆနျ ပွောနညျး ) မညျ၏။ ဟံသာဝတီဘုရငျ ရာဇာဓိရာဇျက ( အဆှတေျော ) ဟု ရေးသားသညျကို ဒှါရဝတီမငျးက မကနြေပျ၍ ဟံသာဝတီ သားတို့က ပွလေညျအောငျ ဖွရှေငျးပုံကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
အိုးနှငျ့ဆနျသညျ တနျအောငျခကျြလြှငျ နူးနပျစှာ သုံးဆောငျရသကဲ့သို့ စကားအရာတှငျလညျး မယုတျမလှနျနှငျ့ လိုရငျးရောကျအောငျ ပွောဆိုခွငျးသညျ ( အိုးတနျ ဆနျခတျ ပွောနညျး) မညျ၏။ သားရှအေိုးထမျးလာသညျကို မွငျလိုပါသညျ-ဟု ပွောဆိုသော သုဝဏ်ဏသာမ၏ မိဘ ၂-ပါး ပွောဆိုပုံကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
ဆီကို ရအောငျ ပှတျသညျ့အခါတှငျ အထပျထပျအခါခါ ပှတျရသကဲ့သို့ အလိုရှိသောစကားကို အထပျထပျ ပွောဆိုခွငျးသညျ( ဆီပှတျကညျြပှေ့ ပွောနညျး ) မညျ၏။ ဘုရားပိန်နဲတိုငျကိစ်စ ဆှေးနှေးရာ၌ မကညျြးနှဈလဲ ကောငျး၊ ကြှနျးလဲ ကောငျး။ ရှားနှဈလဲ ကောငျး၊ ကြှနျးလဲ ကောငျး-ဟု ပွောဆိုပုံကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
ဆငျဝှမေ့ညျဟု လိုကျလြှငျ လှတျရာလှတျကွောငျး တိမျးရှောငျက ခမျြးသာသကဲ့သို့ စကားအရာတှငျလညျး မိမိအဖို့ ဘေးရောကျမညျ့ စကားကို ရှောငျလှဲ၍ ပွောဆိုခွငျးသညျ ( ဆငျဝှရေ့နျရှငျေ ပွောနညျး ) မညျ၏။ ရကျမအောကျ မွကွေီးအထိ ရှခေထြားသော အိမျရှမေ့ငျး ၏ ကြောငျးမှ ရှမြေားကို မွို့ဝနျက အဖကျြခိုငျးရာ အိမျရှမေ့ငျး စိတျဆိုးသညျကို ပွလေညျအောငျ လြှောကျထားသော မွို့ဝနျ၏စကား ကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
တောငျသူတို့သညျ ယာခုတျလြှငျ ခွုံငယျ သဈပငျငယျတို့ကို ဦးစှာ ရှငျးလငျးခုတျထှငျပွီးမှ သဈပငျကွီးငယျမြားကို လှဲသကဲ့သို့ စကား အရာတှငျလညျး ဦးစှာ စကားငယျကိုပွော၍ နောကျမှ စကားကွီးမြားကို ပွောခွငျးဖွငျ့ အနိုငျယူခွငျးသညျ (တောငျသူ ယာခုတျ ပွောနညျး ) မညျ၏။ အမတျကွီးလေးဦးနှငျ့ မဟောသဓာသုခမိနျတို့ ဥစ်စာနှငျ့ပညာ ဘယျဟာက-မွတျသညျ ဟူသော အငွငျးပှားပုံကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
ကွကျတို့၏သဘောသညျ ခှပျမညျပွုသောအခါ နောကျသို့ဆုတျဟနျပွု၍ တကယျခှပျသောအခါမှသာ စီး၍ခှပျသကဲ့သို့ စကားအရာ တှငျလညျး သူ့အလိုကို လိုကျတနျသ၍ လိုကျပွီးလြှငျ စီးသာသောအခါမှ စီးလကျြ ပွောသောစကားမြိုးသညျ ( ကွကျဆုတျ ခှပျပဈ ပွောနညျး ) မညျ၏။ ကဝိသတ်ေတု မဉ်ဇူသာကမျြး၌ ဖျောပွပါရှိသော တရုတျငရှကွေညျ၏ မီးလောငျကိစ်စအတှကျ တရုတျသံမြားနှငျ့ အမတျကွီးဦးပေါဦးတို့ အပွနျအလှနျ ပွောဆိုပုံကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
ဓမ်မကရိုဏျးချေါသော ရစေဈကို ရတှေငျနှဈ၍ ရပွေညျ့လြှငျ အပေါကျကို လကျဖွငျ့ ပိတျယူပါက ရမေထှကျနိုငျသကဲ့သို့ တဘကျလူ၏ စကားကို ပိတျမိအောငျ ပွောဆိုခွငျးသညျ ( ရစေဈပမာ စကားပွောနညျး ) မညျ၏။ သူငယျလေးယောကျနှငျ့ သူအိုကွီးတို့ ယုံတမျးစကား ပွောကွားပုံကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
သူ့စကားကို ဟုတျ၏လညျး မဆို၊ မဟုတျဟုလညျး မဆိုဘဲ မတငျတကြ ပွောဆိုခွငျးသညျ ( ခကျတငျ မောငျးနငျး ပွောနညျး ) မညျ၏။ ဤသူ ငါ့တူ-မဟုတျဟု မညျသူပွောသနညျး-ဟု တောငျဖီလာဆရာတျော ပွောကွားပုံကို သာဓက ထုတျအပျ၏။
မှတျခကျြ။ စကားကွီး ၁၀-မြိုးအကွောငျး ပွဆိုသော ပုံသကျသေ သာဓကဝတ်ထုမြားကို မွနျမာ့စှယျစုံကမျြး အတှဲ (၃)တှငျ အကယျြတဝငျ့ ဖျောပွပါရှိသညျ။ ထိုကမျြး၌ လလေ့ာကွညျ့ရှုကွပါကုနျ။ .
၁၀။ ခကျတငျမောငျးနငျး၊ ပွောဆိုခွငျး၊ မယှငျးမှနျလှ အောငျပှဲရ။ Credit